Cudurka Cagaarshowga C (Hepatitis C) | Somali Health
Home Cudurada Cudurka Cagaarshowga C (Hepatitis C)
Cudurka Cagaarshowga C (Hepatitis C)
Waxaa keena feyruska cagaarshowga C (HCV), tirada adduunka qabta cagaarshowga nooca C waa 170 ilaa 200 milyan oo qof; sanad kasta tirada bukaanka cusub ee uu ku dhaco waxay gaareysaa 3 – 4 milyan. Feyruska cagaarshowga nooca C waxaa la helay 1989-kii, horay waxaa loo dhihi jiray (NON A NON B) oo aan ahayn cagaarshowga noocyada A iyo B, taariikhdaas wixii ka horreeyay wuxuu aad ugu gudbi jiray dhiigga dadka lagu shubo, isagoo keeni jiray cagaarshowga ka yimaada dhiig ku shubida.
Wuxuu ku gudbaa dhiigga iyo dheecaanka qofka jirran marka uu gaaro qofka fiyow. Haddaba, Markuu feyruska dhiigga galo ilaa ay calaamooyinka ka soo ifbaxayaan waxay qaadaneysaa muddo dhan qiyaas ahaan 60 maalin (45 -180 maalin).
Calaamadaha Cagaarshowga B
Cagaarshowga nooca C (HCV) wuxuu yeeshaa raagis (Chronic Hepatitis) 75% ilaa 80%, khatarta kale uu leeyahay waxaa ka mid ah in calaamooyinkii cudurka badanaa aysan soo If baxin 60% ilaa 80% (Asymptomatic), taas ayaa keentay magaca la siiyay oo ah dilaaga aamusan (Silent Killer). Dad badan oo qaba cagaarshowga C ma leh astaamo. Laakiin inta u dhaxaysa 2 toddobaad iyo 6 bilood ka dib marka fayrasku soo galo dhiiggaaga, waxaal la arkaa calaamdahaan
Saxarada oo midab leh
Ka hortagga ugu muhiimsan waa tallaalka cagaarshowga nooca B, oo ka hortagaya in cudurka cagaarshowga uu qofku haleelo, wuxuu siinayaa awood difaac oo joogto noqota. Talaalku waa sida ugu haboon ee lagaga badbaadi karo inuu kugu dhaco cagaarshowgu B.
Halkaan ka aqrsio Cudurka Cagaarshowga B (Hepatitis B)
Halkaan ka aqrsio Cudurka Cagaarshowga A (Hepatitis A)
Previous articleCudurka Cagaarshowga A (Hepatitis A)
Next articleMaalinta cudurka Cagaarshowga oo laga xusay guud ahaan dunnida, gaar ahaan Soomaaliya